Xiriirka Dunida Dunida: wuxuu saadaaliyay baahida biraha caalamiga ah inay koraan 5.8% sanadka 2021 - Shiinaha Foshan Hermes Steel
CNC Laser Jarida
Mirror ahama Steel Sheet
indha tiray Sheet ahama Steel
Qoordiidka ahama Steel Sheet
No.4 ahama Steel Sheet
Gariirka ahama Steel Sheet
Iskutallaab Xaashida Xaashida Xaashida Xaraashka ee Timaha
Dahaarka Midabka PVD Sheet ahama
Sheet Iambarrada ahama Steel
Sheet gadaaman ahama Steel
Xaashid shaabadaysan ahama
Xaashida Xaashida Bir Dahaarka Leh
Dahaarka Bir Dahaar ah
Xaashida birta ahama ee Antique
Anti-Fari Daabac Xaashida Birta ahama
Ahama Steel wiish wiishka Panel
Dahaarka Fududda Qalabka Fudud ee Birta ah
Ahama Steel wiishka saqafka
Cuskado ahama steel wiishka
ahama Steel Screen
Daloolin Xaashida Bir Daloollan
Xaashida birta ee ahama Checkered
Xaashida biraha ahama ee Muuse
3D Laser Sheet ahama
Ururka Caalamiga ah ee Birta: wuxuu saadaaliyay baahida biraha caalamiga ah inay koraan 5.8% sanadka 2021
Macmiilka Shiinaha-Singapore Jingwei, Abriil 15-keedii. Sida laga soo xigtay bogga rasmiga ah ee Ururka Birta Adduunka, Ururka Birta Adduunka wuxuu sii daayay nooca ugu dambeeyay ee muddada-gaaban (2021-2022) warbixinta saadaasha dalabka birta ee 15-ka. Warbixinta ayaa muujineysa in baahida biraha adduunka ay hoos u dhici doonto sanadka 2020 Kadib 0.2%, wuxuu kordhin doonaa 5.8% sanadka 2021, isagoo gaari doona 1.874 billion tan. Sanadka 2022, baahida biraha adduunka ayaa sii kori doonta 2.7%, iyadoo gaareysa 1.925 bilyan tan.
Warbixinta ayaa rumeysan in mawjadaha socda ee labaad ama saddexaad ee faafitaanka faafin doono rubuca labaad ee sanadkan. Tallaalka joogtada ah ee tallaalka, dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee waddammada waaweyn ee birta cuna ayaa si tartiib tartiib ah caadi ugu soo noqonaya.
Al Remeithi, Guddoomiyaha Guddiga Cilmi-baarista Suuqa ee Ururka Caalamiga ah ee Birta, ayaa ka faallooday natiijooyinka saadaashaan: “In kasta oo cudurka cusub ee sambabaha ee faafa uu keenay saameyn ba'an oo ku saabsan nolosha dadka iyo nolosha dadka, warshadaha biraha adduunka ayaa wali nasiib leh. Dhamaadka sanadka 2020 dalabka biraha caalamiga ah waxyar ayuu qandaraas ku qaatay. Tani waxay badanaa sabab u tahay dib u soo kabashada xoogga leh ee Shiinaha, taas oo horseeday dalabka birta ee Shiinaha inuu koro illaa 9.1%, halka dalalka kale ee adduunka, dalabka birta uu hoos u dhacay 10.0%. Sanadaha soo socda, dhaqaalaha horumarsan Baahida birta ee dhaqaalaha soo koraya si isdaba joog ah ayey u soo kaban doontaa. Waxyaabaha taageeraya waa dalab bir ah oo la cabudhiyay iyo qorshaha kabashada dhaqaalaha ee dawladda. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah dhaqaalaha ugu horumarsan, waa inay ku noqotaa heerkii ka horreeyay faafitaanka. Waxay qaadan doontaa dhowr sano.
Isagoo ka hadlaya warshadaha dhismaha ee warshadaha biraha, warbixintu waxay sheegtay in faafa awgeed, isbedelada horumarineed ee kaladuwan ay kasoo muuqan doonaan qaybaha kaladuwan ee warshadaha dhismaha. Ayadoo ay kordheen isgaarsiinta iyo ganacsiga elektaroonigga ah, iyo sidoo kale hoos udhaca safarada ganacsiga, baahida dadka ee dhismooyinka ganacsiga iyo tasiilaadka safarka ayaa sii socon doonta Isla mar ahaantaana, baahida dadku u qabaan tas-hiilaadka saadka ee e-commerce ayaa koray, dalabkani wuxuu u kobcin doonaa waax sii kordheysa. Muhiimadda mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha ayaa kordhay, mararka qaarna waxay noqdeen waxa kaliya ee dalal badan ay dib ugu soo ceshan karaan dhaqaalahooda. Dhaqaalaha soo koraya, mashaariicda kaabayaasha waxay sii wadi doonaan inay noqdaan cunsur xoog leh. Dhaqaalaha horumarsan, mashaariicda qorshaha soo kabashada cagaaran iyo mashaariicda dayactirka kaabayaasha waxay horseedi doonaan baahida loo qabo warshadaha dhismaha. Waxaa la qiyaasayaa in sanadka 2022, warshadaha dhismaha adduunka ay ku laaban doonaan heerka 2019.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in heer caalami ah, warshadaha birta, warshadaha baabuurta ay soo martay hoos u dhacii ugu weynaa, waxaana la filayaa in warshadaha gawaarida ay la soo kaban doonaan soo kabasho xoog leh sanadka 2021. Warshadaha baabuurta adduunka ayaa la filayaa inay ku soo laabtaan heerka 2019 sanadka 2022. Inkasta oo warshadaha mashiinada aduunka ay haleeleen hoos udhaca maalgashiga sanadka 2020, hoos u dhaca ayaa aad uga hooseeya kii 2009. Warshadaha mashiinada ayaa lafilayaa inay dhaqso usoo kabtaan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qodob kale oo muhiim ah oo sidoo kale saameyn ku yeelan doona warshadaha mashiinnada, taas oo ah, dardargelinta dijitaalka iyo otomatiga. Maalgashiga aaggan wuxuu kobcin doonaa koritaanka warshadaha mashiinada. Intaas waxaa sii dheer, mashaariicda cagaaran iyo qorshooyinka maalgashiga ee ku saabsan tamarta la cusboonaysiin karo sidoo kale waxay u noqon doonaan aag kale koritaanka warshadaha mashiinada. (Xigasho: Sino-Singapore Jingwei)
Saxanka birta ahama
Waqtiga boostada: Abriil-16-2021
Ku dar: 21 / F, Block 1, Jinchang International Metal Trading Market, Chencun, Shunde, Foshan, Guangdong, Shiinaha
Telefoon: + 86-757-29273045
Telefoon: + 86-757-29273047
Fakis: + 86-757-29273033
Lagu sameeyay Shiinaha
Wadahadalka khadka tooska ah ee WhatsApp!